Gejain’ny lalànan’ny media lazaina ho noho ny COVID-19 ny fahalalahana miteny ao Alzeria · Global Voices teny Malagasy
Miatrika olana eo ambanin'ny lalàna vaovao ireo sehatra famoaham-baovao hafa
MpanoratraGlobal Voices MENA
Voadika ny 08 Mey 2021 4:07 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Español, Nederlands, English
Pikantsary avy amin'ny fantsona YouTube France24 mampiseho ny sarin'ny fihetsiketsehana Hirak tao Algeria.
Nikorontana i Algeria nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2019. Nisy hetsi-panoheram-bahoaka ny governemanta, antsoina hoe Hirak, nahavory fanohanana faobe tamin'ireo faritra ara-poko sy sarangam-piarahamonina maro ary mbola mitohy izany amin'izao fotoana izao. Manoloana izany, namaly tamina lalàna sy fepetra izay mametra ny fahalalahana maneho hevitra ny governemanta, ary matetika nohamarininy fa ilaina izany iadiana amin'ny areti-mandringana.
Nanomboka ny volana febroary 2019 ny hetsika Hirak, andro vitsivitsy taorian'ny nanambaran'ny filoha Abdelaziz Boutefikla, teo amin'ny fitondrana nanomboka ny taona 1999, fa hifaninana ho amin'ny fehim-potoam-piasana fahadimy izy. Nanohitra ny mponina tao Alzeria tamin'ny alalan'ny fihetsiketsehana an-dalambe milamina lehibe indrindra hatramin'ny faran'ny Ady An-trano Alzeriana tamin'ny taona 2002. Tamin'ny farany, nanaiky ny fahareseny i Boutefikla ary niala tamin'ny 2 aprily 2019.
Na izany aza, tsy nitondra fanovana nantenain'ny ankamaroan'ny Alzeriana ny fialany. Noho izany dia nanohy ny fihetsiketsehana am-pilaminana isaky ny zoma izy ireo nanerana ny firenena mba hitaky fanovana ara-politika lehibe ary hampitsaharana ny kolikoly miely patrana.
Araka ny fanazavan'ity kaonty twitter manara-maso ny hetsika Hirak ity, ny olana resahana dia ny toe-tsain'ny governemanta izay heverina fa mampiasa tohan-kevitra isan-karazany, ao anatin'izany ny areti-mifindra, mba hanamarinana ny fangejany ny fiarahamonina:
Mampiasa ny COVID-19 ny fitondrana miaramila ao Alzeria mba hanakanana ny fitroaram-bahoaka. Natao hiadiana amin'ity toe-tsaina ity sy ny famoretana mifandraika amin'izany ny fitakiana fototry ny #hirak hitsanganan'ny fanjakana sivily fa tsy fanjakana miaramila
Namaly ny fihetsiketsehana ihany ny tompon'andraikitra tamin'ny alàlan'ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny volana Desambra 2020, izay nandresen'i Abdelmajid Tebboune. Saingy, natao ankivy ny latsa-bato, hita taratra ny tsy fahatokisana teo amin'ny ampahany manan-danja amin'ny vahoaka amin'ny maha kandidà azy satria maro ny Alzeriana nahita fa tsy misy maha samihafa azy loatra tamin'ireo teo alohany.
Eny tokoa, raha naneho ny fanohanany tany am-boalohany ny hetsika Hirak i Tebboune, dia nanova ny fomba fijeriny izy ary nanohana ny fandaniana ny lalàna mametra ny fahalalahana maneho hevitra any Algeria. Ary dia nitohy ny fanoherana.
Fiovana voalohany amin'ny lalàna mandritra ny areti-mandringana
Tamin'ny volana Aprily 2020 ny fanovana lehibe voalohany natao. Nifidy ny fanitsiana ny fehezan-dalàna famaizana izay nampiditra sazy mavesatra kokoa amin'ny tranga hafahafa ny parlemanta sy ny loholona Alzeriana, ka anisan'izany ny fotoanan'ny areti-mandringana. Village de la Justice [Tanànan'ny Rariny], famoahana an-jotra iray natsangan'ireo manam-pahaizana manokana momba ny lalàna, manazava izany ao amin'ny lahatsorany:
Ahitana sazy an-tranomaizina iray hatramin'ny telo taona, ary onitra hatramin'ny 300.000 Dinar Alzeriana [2 261 dolara Amerikana] ho an'ny “olona rehetra izay hita fa meloka amin'ny fanaparitahana vaovao diso” ny Fehezan-dalàna famaizana vaovao. Mety ho mavesatra kokoa ny sazy, manomboka amin'ny telo ka hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina “raha atao mandritra ny fotoanan'ny firindrinana ara-pahasalamana na loza voajanahary, biolojika na teknolojia na loza hafa ireo heloka ireo”.
Lalàna manafay bebe kokoa eo ambany fitondran'ny filoha vaovao
Any Algeria, eo ambany fifehezana feno sy sivana henjana ny haino vaky jerim-panjakana, manome vaovao izay tsy maintsy ankatoavin'ny manam-pahefana aloha voalohany indrindra. Amin'izany toe-javatra izany, lasa vahaolana hafa lehibe amin'ny loharanom-baovao hafa ireo sehatra tsy miankina toa ny media tsy miankina, media sosialy, fahitalavitra an-janabolana ary ny media hafa any ivelany.
Nohadihadian'ny GV tamin'ny telefônina, manazava ny zava-misy ankapobeny i El Kadi Ihsane, izay tompona fampahalalam-baovao tsy miankina maromaro:
Nandritra ny valo taona izao io rafitra io no namehy fatratra ny fomba fampitaovana ara-bola ny fampitam-baovao, hany ka mety hanimba azy izany. Mandalo fotoan-tsarotra isika amin'izao fotoana, tsy misy maodely afaka manome vaovao tsara noho ny tsy fahampian'ny fitaovana satria tsy ahafahana manome antoka ny maodely ara-toekarena azo iainana sy hanaovana vinan'ny hoavy ireo fameperana ireo, ao anaty tsy fahatomombanana tanteraka isika.
Taorian'izay dia nitombo 12 isanjato ny fidirana amin'ny aterineto teo anelanelan'ny taona 2019 sy 2020, nahatratra 52 isanjaton'ny mponina izany.
Taorian'ny fanitsiana ny fehezan-dalàna famaizana tamin'ny volana aprily 2020, nandray ny didy hitsivolany voalohany mifehy ny media elektronika ny governemantan'i Tebboune tamin'ny Desambra 2020. Ahitana fameperana vaovao amin'ny fampandehanana ny haino vaky jery nomerika any Alzeria ity didy hitsivolana ity ary maneho ny toe-tsain'ny governemanta araka ny nohazavain'ny Minisitry ny Serasera tamin'ity lahatsoratra ity :
Ity didy hitsivolana, voalohany amin'ny karazany any Alzeria, ity dia iray amin'ireo laharam-pahamehana amin'ny drafi-pandaminana amin'ity sehatra ity vokatry ny fiheverana nomen'ny filohan'ny Repoblika ny nomerika ankapobeny sy ny fifehezana ny media an-tserasera. Ahitana tombony sy fatiantoka ny media toy izany, mitranga ny fatiantoka rehefa ampiasaina hanimba ny isam-batan'olona sy ny andrim-panjakana ny media amin'ny alàlan'ny fanaparitahana tsaho, vaovao sandoka ary horonan-tsary namboamboarina.
Anisan'ireo fanovana nentin'ity didy hitsivolana ity ohatra ny itakiana ny haino vaky jery alzeriana hisoratra anarana amin'ny vala aterineto .dz, ao anatin'ny fikasana mazava hifehy ny votoaty noho ny lalàna henjana momba ny sivana any Alzeria. Eny tokoa, voasoratra ivelan'i Alzeria ny ankamaroan'ireo tranonkala mpanohitra, raha tsy izy rehetra, mba hiarovana ireo mpandray anjara ao aminy, izay matetika mampiasa anaram-bositra mba hiarovana ny tenany sy ny fianakaviany amin'ny fanorisorenana ataon'ny fanjakana.
Mizaka ny vokany henjana ireo mpanao gazety sy bilaogera
Raha namoaka gadra politika maromaro ny manampahefana Alzeriana tamin'ny 18 febroary 2021, tamin'ny ezaka hisorohana ny fihetsiketsehana goavambe hanamarihana ny tsingerintaona faharoan'ny hetsika Hirak, samy nizaka mafy ny vokany avokoa ireo feo sahy indrindra miaro sy maneho ny fahalalahana maneho hevitra noho ny fahasahiana mitaky ny zon'izy ireo.
Ohatra iray amin'izany i Walid Kechida, mpamorona ny pejy Facebook antsoina hoe “Hirak Memes” manana mpikambana efa ho 15.000, izay anehoany sary mahatsikaiky mitsikera ny governemanta sy manohana ny hetsika Hirak. Nosamborina izy tamin'ny 27 aprily 2020 noho ny fiampangana azy ho “manala baraka ny filoham-pirenena”, heloka bevava voalaza ao amin'ny fanitsiana ny fehezan-dalàna famaizana tamin'ny aprily ao amin'ny sehatry ny famoahana anjotra. Navoaka izy tamin'ny 31 Janoary 2021, taorian'ny nigadrany sivy volana.
Toy izany koa i Khaled Drareni, iray amin'ireo mpanao gazety mahitsy fiteny indrindra nandritra ny hetsika Hirak, navotsotra tamin'ny 19 Febroary izy, rehefa nandany herintaona an-tranomaizina noho ny fiampangana azy fa “nandrisika famorian'olona tsy mitam-piadiana”.
Araka ny nolazain'i Amira D., mpianatra sady mpikatroka, izay tsy te hanome ny anarany feno tamin'ny GV hoe:
Nahavita nampandohalika tamin'ny alàlan'ny penina sy telefônina fotsiny ireo tovolahy roa ireo, ary maneho ny endrik'ireo tanora Alzeriana, mitovy amintsika izy ireo ao anatin'ny fahasamihafana narafitry ny tanorantsika. Te hampatahotra antsika amin'ny alàlan'ny fampiasana ny lalàna [fitsarana] ny rafitra.
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny andian-dahatsoratra manadihady ny fitsabatsabahana amin'ny zo nomerika anaty firindrinana sy ny mihoatra izany mandritra ny areti-mandringana COVID-19 any amin'ny firenena afrikanina sivy: Oganda, Zimbaboe, Mozambika, Alzeria, Nizeria, Namibia, Tonizia, Tanzania, ary Etiopia. Vatsian'ny Africa Digital Rights Fund (Tahirim-bola ho an'ny Zo Nomerika ao AFrika) an'ny (CIPESA) The Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (Fiaraha-miasa momba ny politika iraisam-pirenena momba ny TIC ho an'i Afrika Atsinanana sy atsimo ) ara-bola ny tetikasa.